आइसिसी विश्व टी–ट्वान्टी क्रिकेटमा आज नेपाल र थाइल्याण्डबीच भिडन्त, कसले मार्ला बाजी ? – Nepali Profile
आइसिसी विश्व टी–ट्वान्टी क्रिकेटमा आज नेपाल र थाइल्याण्डबीच भिडन्त, कसले मार्ला बाजी ?
रोशन राना २१ असोज २०७५, 6:38 am
काठमाडौं, २१ असोज । मलेसियामा भइरहेको आइसिसी विश्व टी–ट्वान्टी क्रिकेट एसिया छनोट समूह ‘बी’ अन्तर्गत आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले आज थाइल्याण्डसँग खेल्दै छ । अघिल्ला दुई खेलमा लगातार जित निकालेको नेपालले तेस्रो खेलमा थाइल्याण्डसँग आज खेल्न लागेको हो।
यसअघि नेपालले शनिबार आयोजक मलेसियालाई ८ विकेटले हराएको थियो भने त्यसअघि पहिलो खेलमा म्यानमारलाई पनि ८ विकेटले नै हराएको थियो। क्वालालम्पुरस्थित वायुमास ओभलमा नेपाल र थाइल्याण्डबीचको खेल नेपाली समय अनुसार १२ः१५ बजे सुरू हुनेछ। थाइल्याण्ड नेपालको लागि नौलो प्रतिद्वन्द्वी समेत हो । महिला र उमेर समूहमा नेपालले थाइल्याण्डसँग प्रतिस्पर्धा गरिसके पनि पुरुष टोलीले भने दोस्रो पटक खेल्न लागेका हो।
यसअघि सन् १९९८ को एसीसी ट्रफीमा नेपाल र थाइल्याण्डबीचको खेल हुने भनिए पनि वर्षाले उक्त खेल स्थगित भएको थियो । जारी प्रतियोगितामा ३ खेलबाट ५ अंक जोडेको थाइल्याण्ड शीर्ष स्थानमा छ। २ खेलबाट ४ अंक जोडेको नेपाल तेस्रो स्थानमा छ। २ खेलबाट समान ४ अंक जोडेको सिंगापुर दोस्रो स्थानमा छ।
नेपालले यसपछि मंगलबार भुटानसँग, बुधबार चीन र शुक्रबार सिंगापुरसँग खेल्नेछ । छनोटबाट शीर्ष तीन टोलीले एसिया छनोटमा स्थान बनाउने छन्। एसिया छनोटबाट शीर्ष दुई टोलीले विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन् । एसिया छनोटमा ७ टोलीले खेल्नेछन् । अष्ट्रेलियामा हुने टी-ट्वान्टी विश्वकप सन् २०२० को अक्टोबर १८ देखि १५ नोभेम्बरसम्म हुनेछ। जसमा १६ टोलीले खेल्नेछन्।